Xiriirka kubada cagta Soomaaliyeed ayaa ku dhawaaqay xiliga rasmiga ah ee la ciyaari doono koobka Super Cup-ka Soomaaliya.
Maaliimada Jimcaha ah ee soo aadan ayey xiriirku shaaciyeen in la ciyaari doono koobka Super Cup-ka oo kooxaha Elam iyo Dekeda ay ku wada balasanyihiin.
Koobkan ayaa waxaa wada dheela kooxda soo qaada horyaalka heerka koowaad ee dalka iyo kooxda hanata tartanka Janaraal Daa’uud waana tartan sanadle ah.
Elman ayaa xili ciyaareedkan ku guuleysatay tartanka Janaraal Daa’uud waxaana ciyaarta kama danbeysta ay ku garaaceen kooxda ka socotay heerka labaad ee Jamhuuriya oo ay kaga adkaadeen 1-0.
Dhankeeda Dekeda ayaa ku guuleysatay horyaalka heerka koowaad ee dalka mudo kadib waxaana ay soo qaateen xili ciyaareed dahabi ah oo ay hanteen horyaalka Soomaaliya.
Garoonka Banaadir Stadium ayaa Jimcada soo aadan oo taariikhda ay ku beegantahay 29 December 2017 marti galin doono ciyaarta kama danbeysa Super Cup-ka.
Kooxda kubada cagta ee Banaadir Sports Club ayaa sanad ciyaareedkii la soo dhaafay ku guuleysatay koobka Super Cup-ka oo xiligaasi ay ka adkaadeen kooxda Jeenyo oo xiligan marxalad adag ku jirta markii kooxda ay isaga tageen inta badan ciyaartoodyii kooxdaasi.
Ku dhawaaqistan ayaa ku beegmeysa xili maalmo ka hor garoonka Banaadir Stadium lagu soo gaba-gabeeyay ciyaaraha maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo xulka Jubbaland sanadkan loo caleema saaray.
Kooxda Elman oo Dekeda kaga guuleysatay Super Cup-ka Soomaaliya...